Munhukadzi Kuzvidzidzisa Kusvika Pakurhojewa Munhukadzi Kuzvidzidzisa Kusvika Pakurhojewa
Munhukadzi Kuzvidzidzisa Kusvika Pakurhojewa
Uyu mubvunzo wabvunzwa asi nokuti mhinduro yacho ihombe ndati zviri nani ndise zvese mumbvunzo nemhinduro pazvo zvega pane kuzvinyora pamibvunzo nemhinduro.
Muvunzo: Nhai Mai Chibwe, ndine dambudziko rokuti handina kumbotundawo pakuvata nomurume. Ndinohwa vamwe vachiti vanotunda asi ini handizivi kuti zvinoitika sei uye kuti ndingazviitawo sei. Ndinoda chose kuvata nomurume wangu uye ndinonakirwa nazvo asi handina kumbotunda pazviri.
Imwezve nyaya ndeyokuti ndikakwira murume, ndinoti ndikaita chikapa ndinokasira kuneta zvokuti ndobva ndangorega murume oita ega.
Mhinduro? Kunakigwa nokuiswa kuri mufungwa yomukadzi, kwete pazviito zvomurume.
Munhu wese anonakigwa nezvaakadzidzra kunakigwa nazvo, Vanhu vakawandisa 85% yevanhukadzi vese vanozvagwa mupasi rese vanohwisisa chose nyaya yokuzvibatabata namaoko kusvika wazvitundisa wega pasina kana murume. Maitire awa anokudzidzisa zvinokunakira nezvisinganyanyi kunaka. Vakawanda havapinzi chinhu mukati mechitubu asi kungozvikwizirira bhinzi nematinji kusvika watunda.
Munhu wese paanozowana murume anenge ava kuziva zvinokwanisa kumunakira obva azama kuita zvimwezvo nomurume. Chinonetsa ndechokuti munhukadzi anoda zvinokwiza bhinzi. Munhurume anoda zvokupinza chombo, saka kuti muenzanise zvonetsa. Imwezve nyaya inonetsa ndeyokuti vanhurume pakuvatana vanototi vatunde urume chero zvodii. Vashomanana vanotadza kutunda urume asi chinenge chichitori chigwere. Vanhukadzi vanotanga kutunda (ORGASM) vari vanana (below 20) vashoma. Vakawanda vanozotangira kumakore ari kuma 27 zvichikwira. Hazvirevi kuti unenge usinganakigwi. Unonakigwa chose asi hausviki pachinhanho chokutunda. Unongozoti umwe musi zvoitika wotozogaroita asi kwete mazuva ese. Unokwanisa kuita kaviri kana katatu pavhiki.
Kumadziro okumusoro uri mukati mechitubu pane panodarika dzimwe zvimbo kuzvimba kana waita zemo. Panhu apa panonaka kukwiziwa kupfuura dzimwe nzvimbo. Panonakazve kuti murume apinze chigumwe agokwenyerera. Kana usina kumbozviitwa udza murume akuite kwete nhasi chete asi mangwana nakusweramangwana kusvika wawana makwenyere anonaka. Panonakazve kana murume achinogofapo nechombo pakukoirana kwenyu. Panhu apa panohi nechirungu G-SPOT. Bhinzi neipapa ndizvo zvinonaka kupfuura pamwe pese saka kana uchizama kutunda pabasa wanza atteNTIon panzvimbo mbiri idzi.
Apa kutunda kwatiri kutaura ndekwekusvika pa ORGASM kete kuti pane mvura kana chimwe chinobuda. Wega unohwa muviri wese kutenderedzwa kuita sewoda kufa kuri kunakigwa. Unotadza kuwana CONTROL yomuviri wako kweminuti imwe kana mbiri, sezvinoita murume achikutundira. Koitazve vamwe vashomanana vanototunda zvokubudisa mvura asi isiri weti panguva iyoyo.
Kana uchida kudzidzira kutunda (kwete zvokubudisa mvura) tanga nokuhwisisa kuti bhinzi yako ine mudzi unopatsanuka woti umwe uku umwe uku buri rechitubu ropinda napakati. Ndizvo uchiona kuti kukoigwa nomurume kunoita ukwiziwe madziro echitubu mukati zvokunakira izvo chombo chomurume chiri kukwizirira mudzi webhinzi.
Chihwisisazve kuti mudzi uyu unotanga uri umwe chete pabhinzi chaipo, wosangana neburi rechitubu wotsemuka yoita midzi miviri. Ukatonona une zemo, ukapinza chigumwe muchitubu mako ukatsvanzadzira mukati kumadziro ekumusoro kuri DIRECT pasi pebhinzi unohwa pakazvimbirira ipapo. Kana ukapakwenyerera ipapo unokwanisa kukasira kutunnda. Zvino toti uri kuiswa nomurume, kana ukamufongorera asi usina kunatsokotama chombo chinopfuura chichikwiza panzwimbo iyi panenge pakazvimbirira kuita bundu. Unokwanisa kukasira kutunda.
Kana uchida kuti murume agofe ipapo chaipo nechombo. Vata nedumbu woisa piro pasi pechiuno kusimudzira chiuno. Murume wokukwira achibva shure wokutanyanga wopinza chombo. Ukasimudzira zvakanaka chombo chinonogofa chaipo pakati pemidzi yebhinzi zvokuti akasakukasirira haunonoki kutunda kana uri munhu anokwanisa kutunda. Hatisi tese vanhukadzi tinogona kutunda, vamwe vanononoka kutanga toti kumakore apfuura 30.
Totizve kana wakapakicha makumbo ako pamafudzi emurume, Kana ukasimudzira chiuno zvinokwanisika kuti murume pakukoira andotofonya pabundu iri zvinonaka chose zvokuti unokwanisa kutunda.
Totizve iye murume kana ari munhu anofarira kukusveta bhinzi, akati uku ari kukusveta bhinzi uku ari kukukwenya pabundu iri mukati mechitubu, Haunonoki kutunda.
Totizve uri pamusoro pemurume wakatanyanga murume unokwanisa kuti ukakoira murume ukaneta zvawataura unokwanisa kuita sowogara murume asi wakasimudzira chiuno kuti pave ne GAP pakati pako nechiuno chemurume kuti akwanise kukukoira. Ukaita sekurerekera shure murume anonogofa pabundu riya wohwa kuwedzera kunaka. Saka unopota uchiti ukarerekera mberi ukarerekera shure, ukati twi, uku murume achigofa pakasiyanasiyana mukati mako.
Nyaya chaiyo inoita kuiswa kunyayonaka kurerusa muviri (RELAX) kuti uite zvaunoda pakuiswa. Ukuwo murume okunonokera kukutundira, Ukuwo iwe woisa fungwa yese pekutevera chombo nezvachiri kuita. Davira kuti uri kuiswa nomurume waunoda kwete kuomesa muviri. Rega muviri unakigwe nazvo. (inonzi pachirungu LET GO).Kana zvichinaka, usaruma mazino kuti usaita ruzha rega ruzha guitike. Munhukadzi wese anochemerera nokuti zvinonaka. Saka iwe unodirei kunyarara.
Imwe nyaya dzidza kushinya chombo. Kana chitubu chanyorova chombo chero chezaizi ipi chinokwana asi madziro echitubu anoita COLLAPSE pachombo zvokuti pakupinda chombo chinovhura chitubu, pakubuda chitubu chinovharika shure kwechombo. Ndizvo zvinoita kuti kukwizirana muchikoirana kunake. Zvino munhukadzi akadzidza kushandisa masuru yechitubu, anokwanisa kushinya chombo zvokuti murume pakukoira anotadza kungoita zvaanoda. Ukahwa achimhanyisa woshinya chombo kuti aderedza sipidhi yake, Ukahwa achinonoka woregedzera kuti awedzere sipidhi.
Ukaziva kuti oda kutunda, iwe uchida kuti atunde wotanga kupomba chombo Paanonotanga kutunda chaipo womuti chombo kwiii zvokuti haakwanisi kukoira. Kana uri pamusoro wonatsogara zvokuti chombo chese chinopinda womushinya kuti asakwanisa kuita chimwe chinhu. Anokusiira urume hwese hwaanahwo.
Vanhukadzi vakawanda vanodzidza kuzvinakira pakudhonza matinji. Unopedzisira waziva kuti zvinhu izvi zvinonaka kuzvibata wobva wajaira kugarotamba nazvo wega.
Saka apa tiri kuti unofanira kudzidza wega kutunda wozozama kuita uchiiswa nomurume. Zvokuneta zvawataura kuti unoneteswa nokukoira murume kana uri pamusoro, kusajaira kukoira murume. Purakitiza mazuva akawanda. kana kutoudza murume kuti kumukwira kunonaka kuti agogaroda kuti umukwire. Varume vakawanda vanofarira kuziva kuti mukadzi ari kuda kumukwira nokuti zvinoratidza kuti iye, mukadzi anonakigwawo nazvo.
Ichi chidzidzo chikuru pamunhukadzi nokuti pamwe tinogunun'una pakusanakigwa nokuvata nomurume asi dambudziko risiri pamurume ega. Iwe munhukadzi ziva zvinokunakira ugodzidzsa murume kuita zvaunomboita uri wega. Varume hazvivanetsi nokuti kana murume ari ega anongozvikoira maoko obva atotunda urume. Kana azova nomukadzi akapinza chombo mumukadzi anongokoirazve semaitire aanoita maoko ake. siyano yemaitire ishoma. Chakangosiyana kuti mukadzi anodziya muviri zvinowedzera kumira kwechombo uye kuti mukadzi anochemererawo kuratidza kunakigwa, zvinova zvinopa murume zemo rakawedzera.
Isu ndisu tine zvakasiyana pakushandisa maoko nokushandisa chombo. Saka zvinonetsa kuenzanisa kana wava pachombo. Asi kana murume ari pamusoro mukadzi anokwanisa kuti uku murume ari kumukoira uku iye ari kuzvikwizirira bhinzi kuti akasire kutunda. Murumewo akazvibata kuti kukwiza bhinzi kunokutundisa, anokwanisa kudzidza maitire acho opota achikubatsira.
Murume haakwanisi kuita zvaasingazivi. Vanhukadzi havana kufanana saka chero akamboroora umwe mukadzi, usafunga kuti anoziva zvinonakira iwe. Vakadzi vanotundiswa nokurhojewa nechombo vashomanana vasingasviki 30% mupasi rese.
Kutunda ZveFAKE: Kune vamwe vakadzi vanoti kana akaona kuti murume ari kukoira zvinobhowa, Sokuti murume anongoita zvimwezvo zuva nezuva, mukadzi anongopedzisira ongonyebera kuti anakigwa akatunda kuti murume akasire kupedza zvokubhowekkana zvipere. Zvinohi mahure emari uye aya anohi maSMALL HOUSE inyanzvi pakunyebera kutundiswa nomurume, zvinova zvinopa murume manyawi kufunga kuti anogona kurhoja asi iye asingagoni.
Iwe mukadzi wemumba zama kuhwisisa kuti ukatanga nyaya yeFAKE iyi watozviisa pakaoma nokuti muru haachinei nokunakigwa kwako nokuti uri kutaridza kunakigwa kusipo. Iye haangazivi kuti uri kunyebera uye haana chingamufungisa kuti uri kunyebera. Kana usina njere uye uri munhu asingagoni kuvaka musha, ita hako zvekunyebera kutunda izvi. Ndiwe uchaita dambudziko nazvo.
Zvinoitigwa kuti murume afunge kuti ishasha pabasa. Ko kungomukurudzira kuita shasha chaiyo pabasa zvakaipei. Chinonetsa vamwe vedu panyaya iyi ndechokuti tinosvoda kutaura nyaya sezvairi nomurume. Dzidza kuti kana muri vaviri nomurume wako unogona kutaira mashoko anosvodesa kana une vamwe vanhu. Sununguka kutaura nokubata murume nhengo dzese dzomuviri wake, nokumuudza kuti uri kuda kuiswa izvosi kana kuti kana apedza zvaari kuita ngaauye muisane. Usangomirira murume.
Kana zvichikunetsa tanga nezviroto. Udza murume kuti warota achikuita izvi neizvo. Wochiisa detail yacho. Mava kunovata wochimuudza kuti unoda mumboita zvakarota. Unokwanisazve kutanga nyaya dzinosvodesa pa WhatsApp nomurume ari kubasa. Mutumire mwadhi inomisa chombo. Varume havanetsi kumisa chombo. Akangofunga zvokukurhoja otomira chombo. Kana akakupindura muudze kuti ngaapfuure achitenga TAKE away mugodya mugokasira kundovata nhasi nokuti panhu pari kuvava nokumirira. Zvadaro chigara uchitaura nyaya uchimutsanangurira zvaunoda.
Zvokunyebera kutunda hazvina kwazvinoenda. Siyana nazvo.
Chiyambiro: Asi hwisisa kuti varume vakawanda vechiZImba vanotya bhinzi. Vanofunga kuti ine zvainazvo zvinokuvadza murume. Zvokuti kana yako iri hombe, murume wako anokwanisa kutyiswa nayo. Kana uchida kuvhundusa murume wako iti paya mapedza kuisana wotora UNDERWEAR yake wozvipukuta nayo. Kana murume wako akakurira mumhuri yaiita zvemishonga anokasira kukufungira uroyi, izvo iwe wanga wangokangamwa kugadzirira tawero.
Murume wechiZimba anonetseka panyaya dzese dzinowanikwa bhinzi yemukadzi. Kutoita vekudzidzisa tega isu varidzi. Unohwa murume mukuru achiudza shamwari dzake kuti mwana ari kugwara nokuti pakuzvagwa akagunzva bhinzi yamai vake. Ko bhinzi yacho yange ine chigwere chaiko? Kwahi bodo, kugumhana nebhinzi kunogwarisa vana. Wotozvishaira pazvo kuti viri kubvepi.
Kusatoziva kuti kushamwaridzana nebhinzi yomukadzi wako mumba ndicho chinhu chikuru.
This Article Belongs To Mai Chibwe VekwaZimuto (Pano panotaugwa nyaya dzokugarisana mudzimba zvakanaka chete.)